पाकिस्तानसँग कस्तो रह्यो नेपालको ब्याटिङ ? Online : Next : suchana
समाचार स्थानिय समाचार राष्ट्रिय/अन्तरास्ट्रिय खेलकुद/मनोरन्जन	सुनको भाउ ह्वात्तै बढ्यो	कार्यक्रम तालिका
गुल्मीमा निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताले भने “बिहान ७ बजे नै पुग्नु”
‘न्याय नै नपाएर मर्नुपर्ने पर्दैन’ ,जिल्ला न्याधिश मरासेनी
गुल्मीमा चुनावी चहलपहल तिव्र,भोट माग्न खेतमै पुगे उम्मेद्धवार
पाल्पाको चुनावी प्रचारप्रसार उत्कर्षमा, ‘विकासे एजेन्डा’ प्राथमिकतामा
तीनै तहको निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
चैत १४ – एसिसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा पाकिस्तानको नेपालले २३ वर्ष मुनिको टिमसँग सम्मानजनक स्कोर बनाएको छ । नेपालको ब्याटिङ सोमबार खासै धर्मराएको देखिएन ।
पाँचाैं ओभरदेखि नै विकेट गुमाउन थालेपनि नेपालका ब्याट्स्म्यानले धैयर्ता गुमाएनन् । ठुला सट हान्न र तीव्र गतिमा रन बटुल्न नसकेपनि नेपाली ब्याट्स्मयनले ट्वाक्कटुक्क रन जोडिरहे । दुईजना खेलाडी डक आउट र दुईजनाले सिंगल रन मात्र जोडेपनि बाँकी सबै खेलाडीले दोहोरो अंक छोए । सुनिलको सुझबुझपूर्ण इनिङ
राष्ट्रिय टिमबाट समेत खेलिसकेका खेलाडी रहेको पाकिस्तानले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो । नेपालका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र सुनिल धमला ओपनिङमा आए । सुनिल र आसिफ खेश ओपनर जोडीका रुपमा आउलान कि भन्ने ठानिएका बेला कप्तान ज्ञानेन्द्र र प्रशिक्षक जगत टमाटाले दुवै नयाँ ब्याट्स्म्यानलाई ओपनिङको जिम्मेवारी दिने जोखिम मोल्न चाहेनन् । कप्तान ज्ञानेन्द्रले सोमबार परिपक्व इनिङ भने खेल्न सकेनन् ।
तर आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियन्समा केन्याविरुद्धका दुवै खेलमा राम्रो खेल्न नसकेका सुनिलले सबैैभन्दा धेरै रन बनाए । सुझबुझपूर्ण इनिङ खेल्ने क्रममा उनी अर्धशतक बनाउन ३ रनले चुके । अर्कोपट्टिका ब्याट्स्म्यान धमाधम आउट भइरहेका बेलापनि सुनिल अतालिएनन् र क्रिजको एकातर्फ डटेर पाकिस्तानी बलरलाई चुनौती दिइरहे । उनी ३८ औ ओभरसम्म क्रिजमा रहे । स्कोरबोर्डमा नेपालको १४ रन बनाएको अवस्थामा पाँचौं ओभरको अन्तिम बलमा ज्ञानेन्द्र २ रनमा आउट भए । त्यसको १० बलपछि सागर पुन पनि चार रनमा पेविलियन फर्किए ।
चौथो नम्बरमा ब्याटिङका लागि आएका दिपेन्द्रसिंह ऐरीसँग मिलेर सुनिलले २२ रनको साझेदारी गरे । टिमले ४१ रन बनाएको अवस्थामा दिपेन्द्र पनि १७ रन बनाउँदै आउट भएपछि उनले शरद भेषावकरसँग चौथो विकेटका लागि ७९ रनको साझेदारी गरे । १ सय २५ बल सामना गरेका सुनिलले ९६ डट बल खेले । उनले ४ चौका प्रहार गरे । शरद र विनोदले दिए राहत पाँचौ नम्बरमा ब्याटिङका लागि आएका शरद भेषावकरले ३८ रन बनाए । ५९ बलमध्ये २८ बल डट खेलेका शरदले एक चौका मात्र हानेपनि सिंगल रन लिइरहे । सिंगल रनबाट उनले २८ रन बटुले । चालिसौ ओभरको पहिलो बलमा उनी आउट भए ।
नेपालको इनिङ उकास्न विनोद भण्डारीको पनि महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । ठुला सट र आक्रामक क्रिकेट खेल्ने विकेटकिपर विनोदले ३२ बलमा २४ रन बनाए । ३२ मध्ये २० बल डट खेलेका विनोदले २ चौका र एक छक्का हिर्काए ।
४७ औं ओभरको तेश्रो बलमा उनले हानेको त्यहि एक छक्काले नेपालको सिंगो इनिङमा छक्का ‘निल’ हुनबाट बचायो । विनोद भण्डारी आउट हुँदा नेपाल ४८ औ ओभरमा १ सय ७१ रन बनाएको अवस्थामा थियो । अलराउण्डर आरिफ शेखले पनि नटआउट १८ रनको योगदान गरे । ३० बल खेलेका आरिफको इनिङमा एक चौका सामेल थियो । सुसन भारीले ३ रनको योगदान गरे भने सन्दिप लामिछानेले खाता खोल्न सकेनन् । मेहबुब फेरि ब्याटिङमा फेल नेपालका साहिद अफ्रिदी भनिने मेहबुब आलमले भने रनको खाता खोल्न सकेनन् । उनी पहिलो बलमै डक आउट हुँदा नेपाल ३४ ओभर ५ बलमा ५ विकेट गुमाएर १ सय २५ रन बनाएको अवस्थामा थियो ।
नेपालले इनिङका अन्तिम दुइ बलमा सुशन भारी र सन्दिप लामिछानेलाई गुमायो । पाकिस्तानका घुलाम मुदास्सरले ५ विकेट लिए । ज्ञानेन्द्र मल्लको विकेट लिँदै पाकिस्तानका लागि विकेटको खाता खोलेका मुदास्सरले अन्तिम बलमा सन्दिप लामिछानेलाई आउट गर्दै खाता बन्द गरे । आजको समाचार
गुल्मीमा चुनावी चहलपहल तिव्र,भोट माग्न खेतमै पुगे उम्मेद्धवार	गुल्मी असार १० स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदै जाँदा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकता मतदाताको खेतबारीमै पुगेर भोट माग्न थालेका छन् । मानो रोपी मुरी उब्जाउने यो समयमा किसानहरु धेरै खेतबारीमै व्यस्त हुने
गुल्मीको रुरु गाउँपालिकामा ३२ सिटका लागि ७१ जना उम्मेद्धवार	असार १० गुल्मी असार १४ गते हुने दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गुल्मीको रुरु गाउँपलिकामा ३२ सिटका लागि ७१ जना उम्मेद्धवार चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।
साथै दोश्रो चरणमा यहि असार १४ गते हुने
घुम ओढेर भोट हाल्नुस “ सांसद गोकर्ण विष्ट”	गुल्मी असार ७ नेकपा एमालेका केन्द्रिय सचिव गोकर्ण बिष्टले १४ असारमा पानी परेपनि छाता र घुम ओढेर मतदान गर्न सवै कार्यक्रताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले १४ असार मध्ये बर्खा भएकाले धेरै किसान मतदानमा सहभागी
एक दिनको काम लागि सदरमुकाममै धेरै दिन बिताउँछन् गुल्मेली	गुल्मी असार ७ चुनावी चहलपहल बढेसँगै ग्रामिण भेगहरुमा यात्रुहरुलाईसदरमुकाम तम्घास आवतजावत गर्न निकै सास्ती परेको छ । सदरमुकाम तम्घास भएर ग्रामिण भेगमा छुट्ने सवारी साधनहरु नपाउँदा यात्रुहरुलाई समस्या भएको हो
Anita Khatri Station Manager Narayanprabhat Marasini News Chif Ramu magar Technical -Rj Arjun Kunwar Technican-Rj ruma Paudyal Marketing Yagya Panthi Technican Manu Sunar News Reader Roshan singh Thakuri Rj Baburam bk technical फेसबूक
Copyright © 2015 Radio RESUNGA 106.2 MHz. All Right Reserved.